Ungayithola Love True Online?
Igcine ukubuyekezwa: Dec. 27 2017 | 3 imiz ufunde
Eminyakeni eyishumi nje edlule ukuphola online kwaba cishe yinganekwane of, futhi labo ababengawazi nolwazi ngalo bacabanga ukuthi kwaba into eyinqaba for ngempela 'laphaya' izinhlobo noma abantu yenza ngokuphelelwa yithemba ababengakwazi ukuthola usuku 'ngendlela evamile'.
Indlela izikhathi sezishintshile! Dating Online kuyinto evamile manje umatasa, Abantu minded career-, Nokho akusikho nje abantu matasa abaye bawusekela lo online ukuphola isitimela – oh no! Wonke umuntu kusukela umfelokazi umnyango eceleni Uncle Sam ibonakala kulo! The nabadala the young, amadoda kanye nowesifazane kuzo zonke izizinda zokuphila, izinkolo, izinhlanga nezizinda ikwenza. Dating Online sekushintshile kusukela into kuphela 'izinhliziyo lonely' uyocabangela, ekubeni indlela kuqhakanjiswe kanzima usuku. Ngisho enhle, Abantu abaphumelelayo benza khona, kanye everybody omunye! Kungenxa yokuthi sonke ebona ukuthi nje elula! Kulesi era online kwaba umkhuba oqhubekayo engokwemvelo.
Ngakho yiziphi izinzuzo nezingozi ukuphola online futhi yini ngempela alindele ukuthola uthando lweqiniso ngale ndlela?
Well ezinye izinzuzo ezisobala. Uthola ukufinyelela abantu abaningi ngaphezu kwakho kungaba ukwazi ukuhlangabezana by dating kunoma yiziphi izindlela zesintu. Nokho lokhu kungaba futhi eze udosi in the umsila, okusho ukuthi baningi abantu abazokwazi ukuthola nina ongase ngeke bakwazi bathanda ukuxhuma. Futhi kukhona ethile 'inzuzo esheshayo' ukuthi kungenzeka nge ukuphola online, okuyinto uma kungenjalo wona are, angashiya umuntu enomuzwa ngempela amandla.
Yini I mean by 'inzuzo esheshayo'? Well ungase ukhuluma nomuntu usuku, kuphela ukuba ngokuphelele zinyamalale off the radar the next. Lokhu kuvame kakhulu. Uyothola thuma e-mail never get waphendula futhi amathuba wukuthi uzoba ezinye ungalokothi Ukuphendula noma. Kuba kude esingaphansi kunomuntu ezinye izindlela zesintu ukuphola le nto abanye abantu. Ngiphawule lokhu kubonakala hit isizukulwane endala nzima, njengoba bajwayele imikhuba nomusa ngokwengeziwe dating yendabuko, lapho isibonelo ubungeke utshele othile uma engafuni ukuphola futhi, futhi nje akanjalo online (ngisho uma sicabanga ukuthi kufanele kube).
Kodwa uma ungakwazi ukwamukela lezi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama little, Ngicabanga ukuthi kungaba ithuluzi esikhulu ukuxhumana nabantu, futhi yebo ngisho sokuthola uthando.
Yebo kukhona kancane romantic and more 'okusemthethweni' ngokukhuluma nge e-mail, Nokho kungaba buzz ukubona lokho e-mail uthola futhi uxoxe love izithakazelo abangahle. Futhi Yebo uma ufika langempela 'mathupha' dating isigaba, romance kungaba sifake kalula ke.
Kudingeka nokuba alungele lokuthi cishe ukuhlangana nabantu abaningi abenza ngeke ukuthandana – eqinisweni ungase ngisho azithande! Umuntu besho iphrofayli enkulu kodwa uma uhlangana nabo emhlabeni wangempela uxhumano nje kuyinto engekho. Futhi qaphela ngoba kukhona ezinye scammers online, abantu abangeyona kwangempela futhi nje ukuzama esibhekene for imali yakho noma siqu imininingwane. Kukhona hhayi kuvamile isipiliyoni sami, kodwa kukhona khona mix. Kukhona abantu abenza nje 'bengidlala?', Abantu abenza online ngifuna sex, ngisho abanye abantu abashade. Kodwa uma ungakwazi ukusingatha lesi futhi Abayi de-eyashukumisela, ke ngokuqinisekile can uhlangana nothile online ubani ephelele, futhi nobani uma uhlangana ekuphileni kwangempela, ungaba uthando lwangempela nge. Ngiyazi of imibhangqwana eminingi yimpumelelo abaye wahlangana ngale ndlela.
Khumbula nje noma, uze wahlangana nabo umuntu akuyona ongokoqobo.
Ngakho Life Real = Love Real.
Futhi nje once uthatha okungaxhunyiwe futhi zibe nokuphila kwangempela ukuthi uxhumano weqiniso angakhula abe nobuhlobo obunothando.